Igwe igwe ice kacha mma na China
site ha na 20-09-17
Obi abụọ adịghị ya na teknụzụ igwe igwe igwe si Vogt USA, ọ na - emekwa igwe igwe igwe kachasị mma. Ruo ogologo oge, Vogt na-achịkwa ahịa maka teknụzụ ya kachasị elu. Igodo nke teknụzụ ahụ bụ maka njikwa njikwa mmiri na sistemụ. Mgbe disas ...
Mmezi nke igwe akpụrụ
Kedu ihe ekwesịrị ị paida ntị na mmezi nke igwe akụrụngwa kwa ụbọchị, yana akụkụ ise ndị a kwesịrị iji nlezianya mee n'oge a na-eji ya: 1. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ adịghị ọcha na mmiri ma ọ bụ na mmiri adịghị mma, ọ ga-ahapụ ọkwa evaporator ice-eme tree ruo ogologo oge, na t ...
Principlekpụrụ ọrụ nke igwe akụrụngwa II
Ⅱ. Ọdịdị nhazi ahụ Dị ka usoro mmiri dị iche iche si dị, ọ nwere ike kee ya ụzọ atọ: ụdị ịgba, ụdị imikpu na ụdị mmiri na-agba agba. The Ọdịdị nke ịgba igwe gosiri na Ọgụgụ 3. Mmiri mmiri mgbapụta sprays mmiri n'elu evaporator, na evaporator ice tree m ...
Principlekpụrụ ọrụ nke igwe ice 1
Gịnị bụ ụkpụrụ ọrụ igwe igwe? Ẹdọhọ ke kpukpru owo ifiọkke mfịna emi. Isiokwu a ga-akọwa ụkpụrụ ọrụ na arụmọrụ nke igwe igwe na nkọwa zuru ezu. Onye na-eme ice bụ ụdị akụrụngwa nke ngwa nju oyi nke na-eme ka mmiri dị jụụ ...